JINGHPAW KASA: ဗမာစစ်သားများ နန်စီအင်ရွာ တစ်ရွာလုံးရှိလူများ ချိန်းခြောက်
ဗမာစစ်သားများ နန်စီအင်ရွာ တစ်ရွာလုံးရှိလူများ ချိန်းခြောက်
အောက်တိုဘာ (၁၉ ) သောကြာ
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား ဖားကန့်သွားလမ်းပေါ်ရှိ ကားမိုင်းမြို့ ကထန်ယန် ကြား ကားမိုင်းမြို့ နှင့် (၃) မိုင်အကွာရှိ နန်စီအင် ကျေးရွာရှိ ရွာသားများတစ်ရွာလုံး အား တပ်မ (၈၈) က စစ်သား (၆၄) ယောက်က ရွားသား အသက်ကြီး၊ ငယ်မရွှေး ယောက်ကျားများအား ကြိုးဖြင့်ချီ၊ မိန်းကလေး များအား သေနတ်ပြောင်းဖြင့်ချိန်၍ ခြိမ်းခြောက်ကာ လမ်းပေါ်တွင် နေ့လည်ကတည်းက အခုချိန်အထိ ချိန်းခြောက်နေလျှက် ရှိကြောင်းသိရသည်။ ကလေးများ၊ ကျောင်းသားများကိုမူ စစ်သားများက “မင်းတို့လည်း ကြီးလာရင် KIA စစ်သားများ ဖြစ်လာမှာပဲ” ဆိုပြီး ချိန်းခြောက် ရိုက်နိုပ်စက်မှု များရှိသည်။ကို မိဝါအောင် ကိုမူ ခေါင်းရိုက်ခွဲပေးထားပြီး အသက်ဆုံးရူံး ရဖွယ် ဖြစ်နေကြောင်းသိရသည်။ အခုထိ ဆက်လျှက် ချိန်းခြောက် ကာ လမ်းပေါ်တွင်သာ ထားရှိလျှက်ရှိသော ကြောင်း ကာမိုင်းမြို့မှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ လိုက်သွားကြောင်းသိရသည်။ ကားမိုင်းဖားကန့်လမ်းမှာ ဒီနေ့ပြန်ပိတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
(64) Soldiers from the Burmese (88) battalion, arrested and tied with rope all the male villagers including children and old age, and pointed gun to the female villagers, and put them on the road all the days, in Nam Si Yan, which is between Kamaing and Ka Htang Yan, on 19 October, according to the KIA front line officer report. And again, the cruel Burmese soldiers accused the primary student that “ When you are grown, you all will become KIA”, and beat them. One of the girl student, Mi War Aung, was broken skull by the Burmese soldier beaten. It seemed that the girl will be loose life soon with serious head injury. The road is closed until now, and the Ka Maing’s administers would go there. The Ka Maing and Hpakant road is closed again from today.
fuck you burmess
burmese soldiers are crazy animals.
ထောက်ခံတယ်အခုကြည့်လေရခိုင်သင်္ကန်းပတ်တွေတနူင်ငံလုံးပတ်ပီဘာသာရေပြဿနာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေ ကြတယ်။နိူငံတော်ကလဲသင်္ကန်းပတ်ထားရင်ဘာမှမပြော်ဘူး။လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်။သင်္ကန်းပတ်ထားရင်ဉပဒေမလိုဘူး။အခုတွေ့နေရတာဘဲ။ ကချင်ပြည်မှာလဲဒီကောင်းတွေကီုသတိထားစောင့်ကြည့် ကြပါ။